किन खेल्दैछ भारतीय क्रिकेट टीम नयाँ जर्सीमा? यसकारण ओप्पोले छोड्यो - Everest Dainik - News from Nepal
किन खेल्दैछ भारतीय क्रिकेट टीम नयाँ जर्सीमा? यसकारण ओप्पोले छोड्यो
२०७६, २९ भाद्र आईतवार
काठमाडौँ, भारतीय क्रिकेट टीमले घरेलु मैदानमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेल्ने खेलमा ‘ओप्पो’ अंकित जर्सी नलाउने भएको छ ।
आइतबार धर्मशालामा खेलिन लागेको पहिलो टी-२० खेलबाट भारतीय टीम नयाँ प्रायोजक ‘बाइजु’को नाम अंकित जर्सी लगाएर मैदानमा उत्रिंदैछ । भारतीय टीमको जर्सीलाई यस अघि ‘ओप्पो’ स्मार्टफोनले प्रायोजित गरेको थियो ।
आइतबार साँझ साढे सात बजेदेखि खेलिने खेलको लागि दुवै टीम यस अघि नै खेलस्थल पुगिसकेका छन् र दुवै टीमबीच पहिलो म्याच निकै कडा टक्करको हुने विश्वास गरिएको छ ।
विश्वकप सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डसँग हार बेहोरेर निराश फर्केको भारतीय टीमले वेस्ट इन्डिजलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराएर विश्वकपमा हारको पीडालाई केही हदसम्म कम त गरेको छ यस पटक उसका सामु क्विन्टन डी कक र कगिसो रबाडा जस्ता चुनौती हुनेछन् ।
भारतीय क्रिकेट टीम पहिलो पटक ‘बाइजु’ अंकित जर्सी लगाएर मैदानमा उत्रिने भएको छ । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले २५ जुलाईमा नै अनलाइन शिक्षा र तालिम प्रदायक कम्पनी बाइजुलाई भारतीय टीमको प्रायोजक बनाइएको आधिकारिक पुष्टि गरेको थियो । बंगलुरुस्थित यस कम्पनीले आजको खेलबाट औपचारिक रूपमा ओप्पोलाई प्रतिस्थापित गर्दैछ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना नियन्त्रण कोषमा धोनीले १ लाख दिएपछि व्यापक आलोचना, अरु कसले कति दिए ? (सूचीसहित)
भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुसार बाइजु यस वर्षको सेप्टेम्बर पाँच देखि ३१ मार्च २०२२ सम्म भारतीय टीमको प्रायोजक रहने भएको छ । ओप्पोले मार्च २०१७ मा १०७९ करोड भारतीय रुपैयाँ तिरेर पाँच वर्षको लागि भारतीय टीमको प्रयोजन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो । तर उक्त कम्पनीले बीचमा नै प्रयोजन अधिकार बाइजुलाई सुम्पेको हो ।
किन छोड्यो ओप्पोले प्रयोजन?
ओप्पोले २०१७ मार्चमा मात्र भिभोले राखेको ७६८ करोड रुपैयाँको प्रस्तावनालाई उछिन्दै १०७९.२९ करोड प्रस्ताव गरेर भारतीय टीमको प्रायोजक बनेको थियो । यस दौरान उसले १४ घरेलु शृंखला, २० विदेशी शृंखला लगायत आइसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी, विश्वकप, टी २० विश्वकप जस्ता प्रतियोगीय्तामा भारतीय टीममाथि लगानी गर्नु पर्ने थियो ।
तर २०१९ का पहिला तीन महिना भारतीय स्मार्टफोन बजारमा ७.६ प्रतिशत मात्र हिस्सेदारी भएको ओप्पोलाई यो प्रस्ताव केही महँगो साबित भयो ।
याे पनि पढ्नुस विराटले बनाए अर्को कीर्तिमान, तोडियो धोनीको रकेर्ड
हुन त इन्टरनेसनल डेटा कर्पोरेसन- आइडिसीले दिएका आँकडा अनुसार विश्वभरि स्मार्टफोनको बिक्रीमा ६ प्रतिशतले गिरावट आए पनि भारतमा भने पछिल्लो वर्ष फोनको बिक्रीमा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षका पहिला तीन महिनाको तुलनामा ओप्पोले पनि आफ्नो बजार हिस्सेदारीमा झिनो सुधार गरे पनि भारतमा यसको स्थान चौथोबाट माथि उक्लिन सकेको छैन ।
भारतीय स्मार्टफोन बजारमा २०१९ को पहिलो तीन महिनामा सबैभन्दा ठुलो हिस्सेदारी सियाओमीको रहेको छ । सियाओमीको बजार हिस्सेदारी ३०.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा २२.३ प्रतिशत हिस्सेदारीका साथ सामसुङ छ भने तेस्रो स्थानमा १३ प्रतिशत हिस्सेदारी भएको भिभो रहेको छ ।
ओप्पो र बीसीसीआईबीच भएको सम्झौता अनुसार ओप्पोले बिसीसीआईलाई दुई पक्षीय खेलका लागि प्रति खेल ४.६१ करोड रुपैयाँ र आईसीसीद्वारा आयोजित खेलमा प्रति खेल १.५६ करोड रुपैयाँ तिर्ने कुरा थियो । ओप्पोले प्रयोजन बाइजुलाई हतान्तरण गरेपछि यो दायित्व बाइजुले बहन गर्नेछ ।
को हो बाइजु?
बाइजु ब्याङ्गलौरस्थित थिंक एण्ड लर्न प्राइभेट लिमिटेडद्वारा संचालित सिकाइ एप हो । २०११ मा स्थापना भएको यस कम्पनीले आफूलाई शैक्षिक प्रविधि कम्पनी भनेर चिनाउने गरेको छ । मार्च २०१९ मा यो संसारकै सबैभन्दा ठुलो र महँगो शैक्षणिक कम्पनी बन्न पुगेको थियो । यस कम्पनीको वर्तमान मूल्यांकन ५.४ बिलियन डलर रहेको छ ।
मोबाइल एपका माध्यमबाट यस कम्पनीले भारत र विदेशका महत्वपूर्ण परीक्षाको तयारी सामग्री उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस्ता परीक्षामा आइआइटी, एनइइटी, जीआरइ आदि रहेका छन् ।
गएको ३० वर्षमा सीमित ओभरको क्रिकेटमा भारतले कैयन प्रायोजकहरू भेटाएको छ । यस अवधिमा उसलाई विल्स (लगभग दश वर्ष), सहारा (लगभग १० वर्ष) स्टार र ओप्पो जस्ता प्रायोजक पाएको थियो । भारतीय टीमले प्रयोजकहरूको नाम अंकित जर्सी लगाएर मैदानमा अभ्यासमा र पत्रकार सम्मेलनहरूमा भाग लिने गर्छ ।
ट्याग्स: क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम